6GB RAM ပါသည့် Xiaomi Mi6သည် Galaxy S8 အား Geekbench တွင်ဖျက်ဆီးလိုက်သည် Androidsis
Elvis bucatariu | | Android ထုတ်ကုန်များ, Xiaomi က
benchmark စမ်းသပ်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ် အချို့သောစက်ပစ္စည်းများသည်အစွမ်းထက်သည်ဖြစ်စေ၊ မဟုတ်သည်ကိုကြည့်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်မျိုးစုံမော်ဒယ်များအကြားနှိုင်းယှဉ်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်အပြင်။ အချို့သောမိုဘိုင်းထုတ်လုပ်သူများကဤစမ်းသပ်မှုများသို့မပို့မီပရိုဆက်ဆာများ၏ကြိမ်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါပြproblemနာတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။
Xiaomi Mi6ကိုထုတ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသည် လာမယ့်Aprilပြီလ 19 ရက်နေ့တွင်ပေကျင်း၌စတင်သို့သော်ယခု Geekbench စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်ထုတ်ကုန်ကိုပေါက်ကြားစေပြီး Xiaomi ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တို့ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားပုံရသည်။
Xiaomi Mi6သည် 6GB RAM နှင့် Snapdragon 835 ပါရှိသည်
GeekBench ရှိ Xiaomi Mi 6
Geekbench အခြေခံစံနှုန်းအရ Xiaomi Mi6တွင်ရှစ် core core Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာကိုတပ်ဆင်ထားသည် (စမ်းသပ်မှုတွင် 1.90 GHz နှုန်း၏ကြိမ်နှုန်းရှိသည့်) နှင့် GPU ကို Adreno 5406GB RAM အပြင် Android 7.1.1 operating system အပြင်၊
စမ်းသပ်မှု၌တည်၏ single-core ဖြစ်သည်, Xiaomi Mi6ကိုရရှိခဲ့တယ် 2006 အချက်များစဉ် multi-core စမ်းသပ်မှုမှာ 6438 မှတ်ရရှိခဲ့တယ်။ စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးမှာ Mi6ကသာလွန်ခဲ့သည် က galaxy S8အဘယ်သူ၏ရမှတ် 1916 နှင့် 6011 ခဲ့ကြသည်အသီးသီး။
အလားတူပင် Xiaomi Mi6သည်လည်း၎င်းထက်သာလွန်ခဲ့သည် Samsung ရဲ့ Galaxy S8 +အဘယ်သူ၏ရလဒ်များကိုခဲ့ကြသည် Multi-core စမ်းသပ်မှုတွင် ၁၉၂၉ မှတ်နှင့် single-core စမ်းသပ်မှုတွင် ၆၀၈၄ မှတ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည် S8 + specs များသည် Galaxy S8 နှင့်တူညီသည်"Plus" မှ လွဲ၍ ပိုကြီးသောမျက်နှာပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဘက်ထရီကိုရရှိသည်။
Geekbench တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင် Xiaomi Mi6တွင်လည်းa၅.၁၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution (1920 x 1080 pixel), အတူနှင့်အတူ ကင်မရာနှစ်လုံးဖြစ်နိုင်သည့် 19 megapixel အနောက်ကင်မရာ နှင့် selfie အတွက်နောက်ထပ် 8 megapixel ကင်မရာ။ နောက်ဆုံးတွင် 3200mAh ဘက်ထရီနှင့် Android Nougat ၏ MIUI 8 သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Xiaomi က » 6GB RAM ပါသည့် Xiaomi Mi6သည် Galaxy S8 ကို Geekbench တွင်ဖျက်ဆီးလိုက်သည်
Bruno Blanco Iglesias ဟုသူကပြောသည်
Bruno Blanco Iglesias သို့ပြန်သွားပါ
5,1 ဖန်သားပြင် ... သင် ၅.၅ နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Ethella LO ဟုသူကပြောသည်
ငါလိုချင်တယ် Rene Gomez
Ethella LO ကိုစာပြန်ပါ
Boris Barrera ဟုသူကပြောသည်
Boris Barrera အားပြန်ကြားပါ
Hernán Tellez Torralbo ဟုသူကပြောသည်
ယခုငါလိုအပ်သည် need ၎င်းသည် ajsdak စျေးကြီးလိမ့်မည်
HernánTéllez Torralbo အားစာပြန်ပါ
Diego baldini ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ်၊ သင်လိုချင်တာက Samsung SAMSUNG .. , !!! ကျွန်မဂရုမစိုက်ပါဘူး…!!!
Diego Baldini သို့ပြန်သွားပါ
ဂျင်မီ Alvarez ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်တယ် Samsung က Samsung ပဲ။ အမှိုက်ပုံး
Gussttavo Vassquez ဟုသူကပြောသည်
Gussttavo Vassquez အားပြန်ပြောပါ
Luis Bustamante ဟုသူကပြောသည်
Luis Bustamante အားပြန်ပြောပါ
ဆိုင်း Rodriguez Mendoza ဟုသူကပြောသည်
Xiaomi ကိုလူသိများသည်မဟုတ်လော အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်၊ ရောင်းအားကိုကြည့်ပါ၊
Ancor Rodríguez Mendoza အားပြန်ပြောပါ
Jaire Cortes ဟုသူကပြောသည်
Jaire Cortes အားစာပြန်ပါ
Emilio jose ဟုသူကပြောသည်
Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Huawei မှရောင်းအားကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သူတို့သည် Samsung ဖြစ်သည်ကိုသူတို့မသိရတော့ပါ။ ယခုသူတို့သည် Xiaomi (သို့) I ရှိခဲ့ဖူးသော Huawei ကိုသာသိပြီး Xiaomi သည် Samsung ကဲ့သို့လောက်သော့ခတ်ထားခြင်းမရှိပါ။
Emilio Jose သို့စာပြန်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူးဝစ်နဲ့ဆမ်ဆောင်းတို့ဘက်ထရီတွေဘယ်လိုပေါက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူသိများတယ်၊ မသိသေးဘူးဆိုရင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုယုတ်လျော့သွားစေတယ် ဒါဟာအမျိုးမျိုးရှိသည်ဖို့ကိုထိခိုက်ပါဘူး, တံခါးပိတ်စိတ်ထားလူကြီးလူကောင်းဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်။
Xiaomi (ရှောင်မီ) သည်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး၊ Samsung ကဲ့သို့ကြီးမားသော၊ မရှုပ်ထွေးသောနှင့် myopic ထုတ်လုပ်သူများအားအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ကြားပို့ချပေးလိမ့်မည်။
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကတော့ဒီ myopia ဟာစားသုံးသူကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်နှံ့စေပြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာကတော့ myopic ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဆက်လက်ဝယ်ယူနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်စု4ကွန်ယက်ကို ၀ ယ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်စက်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ Vodafone ကုမ္ပဏီကဒ်နှင့်တွဲဆက်မှုအလုပ်မလုပ်ပါ။ သူတို့ကဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) ဘာကြောင့်လဲဆိုသော်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြောရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲသင့်သည်။ zte A610 ပေါင်းအတွက် DJ DJ tethering သည် ၃ လကြာဝယ်ပြီးနောက်တွင်နားကြပ်ပေါက်သည်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ရောင်းလိုက်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုအလွန်စျေးပေါစွာရောင်းချခဲ့သည်။ ၀ မ်းသာစွာဖြင့်ဘာမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတွင်သင့်တွင် application များဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိသင်သိစေသည်။ သင့်အတွက်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်။ Xiaomi နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ အခြားသူများကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အမှတ်တံဆိပ်အချို့ကိုသိရန်အရာရာကိုဖုန်းဆက်ခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုတို့ထိခြင်း ၂ ရက်နေခဲ့ရသည် အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏မော်ဒယ်များသူတို့ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ပြgiveနာကိုပေးကြသည်၊ BQ E3 သည်အတူတူပင်၊ ၎င်းသည်သူတို့လည်ပတ်ရေးစနစ်ရှိသည့်ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ယခုငါအမည်ကိုမရရှိတော့သောကြောင့်၊ ငါ7သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောမျက်နှာပြင်စမ်းသပ်ပြီးတစ်ချိန်ကငါယူနိမ့်ဆုံး2ဖြစ်တယ်, ငါ6နှင့်အတူခြားနားချက်ရှိပါတယ်, ငါတစ်ချိန်တည်းမှာ ငါဗီဒီယိုတွေအများကြီးနဲ့ဂိမ်းတွေအများကြီးကိုကြည့်နေရင်းငါတောင်သတိမထားမိဘူး။ မင်္ဂလာပါ။
Samsung, xiaomi, HTC, Huawei, zenfone, oneplus စသည့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်များထက် ပို၍ စျေးကြီးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၊ ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ အစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေး၊ ပိုကောင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲအတွေ့အကြုံ၊ လိုက်ဖက်ညီမှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမာလ်တီမီဒီယာ ၀ န်ဆောင်မှု ၄ ခုကိုသာအတိုချုပ်တင်ပြပါမည်။ ဥပမာတစ်ခုပဲ
Samsung s8: super amoled gorilla glass5 display
စျေးအသက်သာဆုံးအမှတ်တံဆိပ်: ips Led
Samsung Galaxy X ခေါက်ဖုန်းကိုယခုနှစ်တွင် OLED ဖန်သားပြင်နှစ်ခုပါရှိသည်